Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe oo Xaqiijiyay Inuu Dagaal Culus ka Dhacay Horhowd/Qabribayax
Warbixintii Xarunta Dhexe oo Xaqiijiyay Inuu Dagaal Culus ka Dhacay Horhowd/Qabribayax
Posted by ONA Admin	/ December 12, 2014
Waxaa socda dagaala culus oo meela kala duwan oo lagu qaaday saldhigyo uu ciidanka gumaysiga ka daganaa dalka. Dagaalada oo CWXO ay si qorshaysan u fulinayaan ayaa khasaare laxaadleh lagu gaadhsiiyay cadawga, waxaana cadawga lagaga dilay inta la hubsaday ciidan kor u dhaafay 50 askari oo darajooyin kala duwan lahaa. Dagaalada ayaa u dhacay sidan;
4/12/14 Xagaray oo dagmada Dhagaxmadow ee Gobolka Jarar katirsan dagaal aad u culus oo CWXO iyo kuwa gumaysiga kudhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay inta lahubsaday 8 askari 12 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/12/14 Jugle oo dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
5/12/14 Horohowd oo dagmada Qabribayax katirsan dagaal aad u culus oo socday mudo 3 saacadood ah oo dhexmaray CWXO iyo kuwa gumaysiga waxaa waxaa guud ahaan cagta lamariyay ciidankii wayaanaha ee halkaas ku sugnaa walina waxaa dhiman faahfaahinta dhabta ah ee dagaalkaas.
6/12/14 Qora oo dagmada Dhanaan ee Gobolka Shabeelle katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 8 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
6/12/14 Burqo oo dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan dagaal ay iskaga horyimaadeen labo ciidan oo kuwa gumaysiga kawada tirsan waxay iska dileen 18 askari 23 kalana waa lagaga dhaawacay.
9/12/14 Ganbacaseeye oo Babaase katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 7 askari 8 kalana waa lagaga dhaawacay.
9/12/14 Guradaxagaray oo dagmada Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka daalan ee wayaanaha lagaga dilay 6 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.